:: My Little World ::: May 2011
WhatsApp for iPhone (free for today)
Whatapps for iPhone is free for today.
Grab it before it going paid again.
WhatsApp Messenger in iTunes Store
WhatsApp Messenger is cross platform and available for iPhone, BlackBerry, Android and Nokia (beta) and yes, those phones can all message each other!
To send and receive messages, WhatsApp utilizes your existing smartphone internet data plan: 3G/EDGE (or Wi-Fi when available)
Thanks Ko Boyz for the info. :)
Posted by Nay Nay Naing at 5/31/2011 01:35:00 PM2comments
Eat With Your Family Day 2011 (27-May-2011)
- Get off work earlier on Eat With Your Family Day
- Cookascrumptious meal for your family, or treat them toameal.
If your company doesn’t know about Eat With Your Family Day, point out the day to your bosses. Who knows, you may just be supportive of the cause, and you’ll get to leave work early and spend more time with your family! ...
Yes! Our Organisation supports
Eat With Your Family Day 2011.
ဒီနေ့ မနက် HR ကနေ "Early Release on 27 May 2011 at5pm for Eat with Family Day" ဆိုပြီး အီးမေးပို့ တာတွေ့ တယ်။ subject to exigencies of service ဆိုတာလေးလည်း ပါတာပေါ့။
အလုပ်တိုင်းကတော့ စောပြန်ခွင့်ပြုတယ် မထင်ဘူး။ လိုက်ရှာကြည့်တာ List တွေ့ တယ်။ ကိုယ်တွေလုပ်နေတဲ့ Company အဲ့ဒီ မှာ မတွေ့ မိဘူး။ နာမည်မပါလည်း အကြောင်း မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီနေ့ မှာ စောပြန်ခွင့်ရှိဖို့ ၊ စောပြန်ရဖို့က အဓိက။
ဟိုးအရင်လို သောကြာနေ့ ညနေ အလုပ်ပြီးချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့အပြင်သွား ထမင်းစား၊ စကားပြောတာမျိုး မလုပ်ဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီ။ အလုပ် အရမ်းများတယ်၊ အိမ်ပြန်ချိန် နောက်ကျတယ်။ နေ့ တိုင်း နီးပါးပဲ။ သောကြာနေ့ ဆို ပိုပြီး အလုပ်များတတ်တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 5/24/2011 12:06:00 PM4comments
ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့အချစ်နဲ့ တို့ နှစ်ဦးရဲ့နေ့ တွေလှပခဲ့
တွယ်တာမှုတွေနဲ့သာယာမယ့်နေ့ တွေအတွက် စိုသောလက်မခြောက်စေနဲ့ 
ရင်ခွင်ထဲ ကြိတ်မှိတ်ကာ သံသယလေးများ မထားပါနဲ့ 
ဒါ အမုန်းဆိုတဲ့ မီးတောက်အတွက် အမှိုက်တွေပဲ
မချင့်မရဲ တိတ်ဆိတ်စွာ နေထိုင်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ 
စာနာမှုတွေနဲ့ ရင်ခွင်ထဲနားလည် အသက်ဆုံးထိတို့ ချစ်သွားမယ်
တေးရေး - ညီညီသွင်
တေးဆို - ဘိုဘို ကော်နီ
Posted by Nay Nay Naing at 5/17/2011 01:29:00 PM0comments
♦ Cartoons - လူ
Source: The Voice Weekly Journal
Posted by Nay Nay Naing at 5/14/2011 10:14:00 PM0comments
16 Doodles from Google
ဒီနေ့မနက် Google ရဲ့ Logo ပြောင်းထားတာတွေ့ မိလိုက်တယ်။
Little Miss Magic အရုပ်လေးဆိုတော့ စိတ်တော့နည်းနည်း ၀င်စားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲ့ထုံစံ တစ်ခုခု အတွက် အနေနဲ့ ပြောင်းထားတာနေမှာ ဆိုပြီး သေချာ ဂ၇ုစိုက် ဆက်မကြည့်မိဘူး။ Google သုံးရင်း သုံးနေရင်း Logo လေးတွေ တစ်ခုထဲ မဟုတ်ပဲ တမျိုးပြီးတစ်မျိုး ပြောင်းသွားတာ သထိထားမိပြီး သဘောကျသွားတယ်။ လိုက်ရှာကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပုံတွေက အများကြီးပဲ။ အားလုံးပေါင်း ၁၆ ပုံရှိတာ တွေ့ မိပါတယ်။
Google Celebrates Roger Hargreaves' 76th Birthday with 16 Doodles
Posted by Nay Nay Naing at 5/09/2011 11:37:00 AM5comments
ရေဆာတယ်။ ရေအေးအေး အားပါးတရ သောက်ချင်စိတ်ရှိနေတယ်။
သောက်ကြည့်တယ် ဒါပေမယ့် ရေသောက်ရတာ မတင်းတိမ်ဘူး၊ အဆင်မပြေဘူး။
ရေတွေက အရသာ မရှိဘူး။
အမှတ်ရမိတယ်။ ပြောတုန်းက သိပ်နားမလည်ခဲ့ဘူး။
သောက်ရေသန့် ချင်း အတူတူ ဘာများကွာလို့ လဲ တွေးမိခဲ့တယ်။
ကိုယ်တိုင်ခံစားရမှ စာနာတတ်တယ် ဆိုတာ သိပ်မှန်တယ်။
နောက်တခါဆို ပြောမှ သိတာမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ သောက်ရတာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ ရေမျိုးပဲ သေချာရွေးဝယ်တိုက်တော့မယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 5/06/2011 01:06:00 AM 1 comments